Sida loo dayactir Error Operating System lagama helin
> Resource > Utility > Dhibaatada Sida loo dayactir Operating System lagama helin
Haddii aad isticmaalayso nidaam Windows oo inta badan dib u heelan nidaam hawlgalka si aad u hesho si dhakhso ah oo qaab computer ka wanaagsan, aad qariib ah kuwaas ma noqon doonto " nidaamka qalliinka lagama helin "fariimaha baadi:
Nidaamka qalliinka lagama helin
Operating System oo maqan
Setup laakiin kama ay helin wax drives adag lagu rakibay on your computer.
Maxaa sababa System lagama helin baadi in uu soo bandhigo?
Marka aad computer waxaa booting, BIOS uu helo nidaam ku wadid aad u adag tahay in la Boot in. Haddii aanay jirin nidaam kasta, computer ku socdaana ma yaqaan meel ay aadaan, sidaas darteed waa in aad fariin u dhib. Hoos waxaa ku qoran sababaha ugu muhiimsan ee nidaamka ka hawlgala Windows maqan yahay.
1. / Nidaamka wax soo saarka aqbasho computer (BIOS) ma ogaan disk drive adag.
2. disk adag ayaa waxaa burburay ama ku kharribeen.
3. Master Boot Record (MBR) on drive adag waa jabtay. Ogow in qaar ka mid ah barnaamijyada dhinac saddexaad ama hawlaha disk dhaawici kartaa MBR ah.
4. An xijaab leheyn waxa lagu calaamadiyaa sida firfircoon.
Ma sii 5. xijaab A ka kooban MBR waa firfircoon.
Sida loo hagaajin baadi System lagama helin
Waxaad had iyo jeer la tasho kartaa motherboard ama hardware drive adag saaraha haddii ay ku haboon, ama kaalmo ka heli karto taageero Microsoft. Waxay ku xiran tahay xaaladda gaar ah, waxaad isku deyi kartaa socda hababka ay u hagaajin baadi System lagama helin naftaada. Waa kuma sidii ay adag tahay sida aad qiyaasi.
Xalka 1: Waa inaad hubisaa in disk adag waxa lagu ogaan karaa BIOS
Marka computer waxaa ay kor u booting, waxaad riixi kartaa muhiimka ah si ay u galaan shaqo Setup BIOS ah. Shaqada ugu muhiimsan ee kala duwan oo laga qaado shirkadaha kala duwan, sida caadiga ah F2, F12 ama Del. Fadlan eegno tacliin ku-shaashadda. Hubi in aad disk adag la aqoonsan yahay oo liiska ku jirta. Haddii drive adag oo aan la ogaado, waxaa laga yaabaa in aad leedahay arrimaha aad disk adag, ka eeg buuga drive adag tahay macluumaad dheeraad ah, ama la xiriir soo saaraha in ka caawiyay.
Xalka 2: Isticmaal Recovery tacsiyeeyaan
Nidaamka Windows siiyaan FIXMBR amarka in arrinta nidaamka dayactir lagama helin, haddii uu keena dhaawacan MBR ah. Haddii aad isticmaalayso Windows XP, waxaad u baahan tahay Windows XP xawaaladaha disk ama Windows XP CD in ay isticmaalaan Recovery tacsiyeeyaan. Marka mid ah labada kuwaas oo la geliyo, computerka aad. Marka "Welcome to Setup" ee shaashadda u muuqataa, jaraa'id R inuu ku soo bilowdo tacsiyeeyaan Recovery ah. Marka ugu tacsiyeeyaan Recovery furan yahay, ku qor sirta Maamulaha (maran by default) iyo fixmbr aqbasho in go'an MBR.
Ogsoonow in amarka fixmbr ku dhaawici karaan miiska xijaab aad (qayb ka mid ah MBR) haddii dhibaato hardware jiro. Waxaad sidoo kale la abuuro laga yaabaa in maqaal qoruhu geli karin amarka this. Waxaad si weyn lagu talinayaa in ay gurmad xogta aad ka hor aad isticmaali this fixmbr amarka.
Arrinta xalka kama dambaysta ah si uu u xaliyo nidaamka qalliinka lagama helin, Xalka 3
Sida aan kor ku soo bandhigay, ah xijaab leheyn Active ama MBR in Risaalo MA firfircoon sidoo kale keeni lahaa nidaamka qalliinka arrinta lagama helin. Wondershare LiveBoot siinayaa interface ah dareen leh iyo saaxiibtinimo aad u hagaajin nidaamka ka hawlgala aan qalad ka helay. By booting ilaa kombiyuutar kasta si nidaam la taaban karin, waxaad samayn kartaa dhibta iyo xitaa rakibi ah nidaamka cusub Windows si deg deg ah. Halkan waa hage guud si uu u xaliyo hab aan arrinta la arkay iyadoo LiveBoot. Ogsoonow in xal 1 waa khasab. First hubiyo wadid aad u adag si sax ah u shaqeeyo.
Tallaabada 1. Samee CD Downlaods ama USB drive la Liveboot in mid ka mid click
Orod barnaamijka on your computer, geliso CD maran ama USB drive galay computer ah oo raaca sida loo saaxir si ay u abuuraan Downlaods CD ama USB drive ah. Dhab ahaantii, waxa aad u baahan tahay inaad samayso waa in ay sameeyaan click ku button burnning ee xarunta ah, ka dibna shaqo kale oo si toos ah samayn doonaa.
Tallaabada 2. Ku bilow adiga oo computer la CD Downlaods / USB
Geli CD ah Downlaods ama USB drive galay computer ka iyo waxa la bilaabi. Marka nidaamka uu bilaabo inuu ku shuban, F12 jaraa'id oo isla markiiba si ay u tagaan Menu Device Boot ah. Markaas dooro "suuro ama USB CD-ROM Drive", oo waxaad heli doontaa menu boot a soo socda. Guji "Boot ka LiveBoot" si aad u hesho your computer.
Tallaabada 3. Dooro "Windows Recovery", guji MBR Recovery oo ka hawlgala sida tilmaamaha ku-shaashadda.
Ka dib helitaanka nidaamka, u tag "Windows Recovery" oo xulo "MBR Recovery" si aad u hesho xal.
Tallaabada 5. Marka MBR Recovery dhamaystiran, computerka aad si ay u arkaan in nidaamka qalliinka arrinta lagama helin haddii la xalin.
Tallaabada 6. Haddii aan qalad nidaamka helay weli dhacdo, guuleysatey in ay mar kale LiveBoot oo taga si Management Disk / Barzakh hanad si aad u hubiso in goobtu ay xijaab Active waa xaq. Haddii aan, calaamadee Risaalo habboon sida xijaab firfircoon si BIOS ka heli karo nidaamka hawl gal.
Badan oo ku saabsan Wondershare LiveBoot Boot CD Baro
Sida loo dayactir lWaxey Loading Error